Momba anay - Zhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd.
Momba ny amor
Niorina tamin'ny 2016, amor dia mpanamboatra OEM / ODM matihanina ary mpanolotsaina vokatra miaraka amin'ny fanavaozana, Manampy anao hahatratra ny tanjonao, ary hanolotra olona manana fiainana maoderina miaraka amin'ny teknolojia vaovao.
Ao anatin'ny fotoana fohy hivoarana 10 tapitrisa USD isam-bolana famakiana fandrosoana, nametraka fampandrosoana, famokarana, varotra sy serivisy amin'ny iray amin'ireo fiainana matihanina ara-barotra famokarana herinaratra. Ny orinasa dia manarona faritra manodidina ny 10000 metatra toradroa, nanamboatra zavamaniry namboarina, vita famokarana 5000 unit, vokatra avy amin'ny fividianana akora, na fizotry ny famokarana vokatra ary fitsapana mifanaraka amin'ny firenena sy rafitra fanamarinana kalitao iraisam-pirenena hampiharina; Ankehitriny ny vokatray dia aondrana any Azia, Afrika, Eropa sy Etazonia ary ny kaontinanta misy ny firenena sy ny faritra,
Zhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd. dia nanao fifanarahana hikambana amin'ny Foshan Shunde North Conductor Industry Co., Ltd .. varotra 20 tapitrisa USD isan-taona. Ny merged dia mitranga amin'ny 1 Janoary 2019 aorian'ny ora fiasana. toerana misokatra amin'ny Foshan Shunde North Conductor Industry Co., Ltd. Sampana Shunde: - Sina shunde làlam-by faha-2, Fampiorenana fahendrena Rihana faha-6.
Ny fanambarana amin'ny fahitan'i amor dia ahafahantsika manome vahaolana "iray-of-a-kind" izay mitarika ny fahombiazan'ny mpanjifantsika sy ny fitomboany - mamorona tombony amin'ny varotra vaovao mahasoa ho anay sy ireo mpiara-miombon'antoka aminay. Handray ny mpanjifanay sy ny mpiara-miasa aminay mihoatra ny vokatra tsirairay sy ny fahaiza-manaony izahay. Hanentana hevitra vaovao amin'ny teknolojia izahay:
Manova ny fomba fifandraisan'ny fikambanana amin'ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny teknolojia mifandray. Amin'ny alàlan'ny fanolorana portfolio feno momba ny fitantanana antonta-taratasy sy ny vahaolana asehoy ny loka, dia manampy ny orinasa hamorona, hitantana, haka sary an-tsaina ary hizara vaovao i Amor mba hahafahana mitrandraka hevitra sy hiara-hiasa amin'ny fomba vaovao. Avy amin'ny New Innovation mankany amin'ny vahaolana momba ny fitantanana antontan-taratasy, ny Amor manitatra karazana teknolojia, serivisy ary fanohanana ao amin'ny birao dia natao hanomezana vaovao misimisy kokoa, vaovao, azo ampiharina ary azo ekena amin'ny farany, hevitra manome aingam-panahy avy amin'ny teknolojia.